Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): KIA က မြန်​မာနိင်​ငံ လုံခြုံ​ရေး ကို တာဝန်​ယူ​တော့ မည်​​လော?.
KIA က မြန်​မာနိင်​ငံ လုံခြုံ​ရေး ကို တာဝန်​ယူ​တော့ မည်​​လော?.
at 3/05/2017 07:44:00 PM
အနာဂတ်​ ဖယ်​ဒရယ်​ ပြည်​​ထောင်​စု မြန်​မာနိင်​ငံ၏​ ဖယ်​ဒရယ်​တပ်​
တွင်​ KIA မှ အဓိက အခန်းဏ္ဍ အဖြစ်​ပါဝင်​လာမည်​ဟု
ယ​နေ့ ကျင်းပ​သော နိင်​ငံတကာ စစ်​​ရေး ​လေ့လာသူများ အဖွဲ့ မှ
ထိုအဖွဲ့ တွင်​ အာရှပစိဖိတ်​ အ​ရှေ့​တောင်​အရှ နှင့်​ မြန်​မာ့ စစ်​​ရေး ​လေ့လာသူများ ပါဝင်​ခဲု့ကြပြီး အာရှပစိဖိတ်​ စစ်​​ရေး​လေ့လာသူ
Professor Dr.Wun Xingling မှ ​နေ၍ သတင်းသမား များကို
​ပြောကြားရာတွင်​ "ကျ​နော်​တို့ စစ်​တပ်​တခု ရဲ့ အ​နေအထား ကို ခန့်​မှန်း
တယ်​ဆိုတာ က အဲဒီ စစ်​တပ်​ရဲ့ စွမ်းရည်​ စည်းကမ်း နဲ့ နိင်​ငံ​ရေး မဟာမိတ်​ ဖွဲ့နိင်​မှု စသည်​တို့ ကို သုံးသပ်​ပြီး အဲ့ဒီ စစ်​တပ်​ရဲ့ အနာဂတ်​ ကို ခန့်​မှန်း ကြတာပါ။ KIA ကိုကြည့်​ရင်​ သူ့မှာ တိုက်​ခိုက်​ စွမ်းရည်​ နဲ့
ပြည့်​ဝပြီး စည်းကမ်း ရှိတဲ့ ရဲ​ဘော်​​တွေ ရှိရှံမက ခိုင်​မာတဲ့ မဟာမိတ်​ ​တွေလဲ ပိုင်​ဆိုင်​ ထားတယ်​​လေ။ ဒါ​တွေ ဟာ KIA ကို အနာဂတ်​မှာ
ထွန်း​ပြောင်​ လာ​စေမဲ့ အချက်​​တွေ​ပေါ့" ဟု​ပြောဆိုသွားပါတယ်​။
ဆက်​လက်​ပြီး အ​ရှေ့​တောင်​အာရှ စစ်​​ရေး​လေ့လာသူ
ူ Mr.Park youn က​နေပြီး​တော့ သတင်းသမား များကို
​ဖြေကြားရာတွင်​" ကျ​နော်​တို့ ​ဒေသတွင်း နိင်​ငံ ​တွေအ​နေနဲ့ လက်​ရျိတပ်​မ​တော်​ ရဲ့ စည်းကမ်းပျက်​မှုနဲ့ ရန်​လိုမှု​တွေကို မလိုလားတာ
အချိန်​ကြာမြင့်​ခဲ့ပါပြီ။ ပြီး​တော့ ကျ​နော်​တို့ဟာ KIA ရဲ့ ​ဒေသတွင်း နိင်​ငံ များနဲ့ အဆင်​​ပြေ မှု၊ ပြည်​တွင်း လက်​နက်​ကိုင်​ အဖွဲ့များနဲ့ အဆင်​​ပြေမှု စတာ​တွေ​ကြောင့်​ သ​ဘောကျ​နေခဲ့တာလဲကြာပါပြီ"
ဟု အကျဉ်းချုပ်​ ​ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်​။
မည်​သည့်​ အချက်​များက KIA အား အနာဂတ်​ ဖယ်​ဒရယ်​ပြည်​​ထောင်​စု
တွင်​ အဓိက အခန်းဏ္ဍ က​နေပါဝင်​လာ​စေမျာလဲ ဆိုတဲ့ ​မီဒီယာများရဲ့
​မေးခွန်း ကို​တော့ မြန်​မာ့ စစ်​​ရေး ကျွမ်းကျင်​သူ Dr. စစ်​ရန်​နိင်​ မှ ​
​နေ၍ " ဒါက အချက်​အလက်​ ​တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်​ ။
ပထမ အချက်​က KIA ဟာ တိုက်​ခိုက်​ စွမ်းရည်​ ပြည့်​ဝ တဲ့ အ​တွေ့အကြုံ ရင့်​တပ်​မ​တော်​ တခု ဖြစ်​ပါတယ်​။ ​နောက်​ သူ့ရဲ့ မဟာမိတ်​ ဖွဲ့နိင်​စွမ်း နဲ့ သူ့မဟာမိတ်​ ​တွေရဲ့ စွမ်းရည်​ ​ကြောင့်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။ မဟာမိတ်​ ​တွေရဲ့ အခန်းဏ္ဍ ကို ​လေ့လာကြည့်​မယ်​ဆိုရင်​
AA ဟာ အလားအလာ အရှိဆုံးလို့​တောင်​သတ်​မှတ်​လို့ရတယ်​
သူ့မှာ လုံ​လောက်​တဲ့ စွမ်းရည်​၊လူဦး​ရေ နဲ့ သံယာဇာတ စသည်​တို့ ကို
ပိုင်​ဆိုင်​ ထားပါတယ်​။​နောက်​ပြီး ပင်​လယ်​ ထွက်​​ပေါက်​ ရှိတဲ့ AAအ​နေနဲ့ မြန်​မာ့ ​ရေပိုင်​နက်​ကို ကာကွယ်​ နိင်​မှာ ဖြစ်​ပြီး အနာဂတ်​
ဖယ်​ဒရယ်​ ပြည်​​ထောင်​စု ရဲ့ အ​နောက်​တံခါးကို ကာကွယ်​ သွားမှာပါ။
ပြီး​တော့ တရုတ်​ နဲ့ထိစပ်​​နေတဲ့ ရှမ်း​မြောက်​ အခြမ်းကို KIA ရဲ့ မဟာမိတ်​ ​တွေဖြစ်​တဲ့ ကိုးကန့်​၊တ​အောင်း နဲ့ ဝတို့က ကာကွယ်​သွားမှာ
ဖြစ်​ပြီး ထိုင်းဘက်​ကို KNU DKBA တို့ကာကွယ်​နိင်​မှာပါ။
လိုအပ်​ရင်​ ရာဇဝင်​ကြီးလှတဲ့ မွန်​ပြည်​သစ်​ပါတီ ရဲ့ ​ထောက်​ပံ့မှုကိုလဲ
ရရှိကြမှာပါ။ India ဘက်​ခြမ်းကို​တော့ ကချင်​ နဲ့ချင်း ဟာ အတူတကွ
ဒါ​တွေဟာ KIA ရဲ့ အ​မျော်​အမြင်​ကြီး လှတဲ့ မဟာမိတ်​ ဖွဲ့စည်းထားမှု
​တွေပါ။ ​နောက်​ပြီး အဓိက ကျတဲ့တချက်​ က လက်​ရှိ တပ်​မ​တော်​ ကို
ဗမာပြည်​သူ​တွေ ကပါ မကြိုက်​​တော့တာ ၈၈ ကတည်းကပဲ..
ဒါ့​ကြောင့်​ အ​မျော်​အမြင်​ကြီး တဲ့ဗမာပြည်​သူ တို့က သူတို့ ရဲ့ အနာဂတ်​ လုံခြုံ​ရေး ကိုဘယ်​သူ့ ဆီမှာ ထည့်​​ပေးထားရမှာလဲ ဆိုတာ ​ကောင်း​ကောင်း သိကြပါတယ်​ ။
ဒီအချက်​​တွေကို ကြည့်​ခြင်းအားဖြင့်​ KIA ရဲ့ လိမ်​မာ ပါးနပ်​ တဲ့ မဟာမိတ်​ ဖွဲ့နိင်​စွမ်း နဲ့ ပြည်​​ထောင်​စု စိတ်​ဓာတ်​ ပြည့်​ဝခြင်းကို
​တွေု့မြင်​ရမှာပါ၊ ဒီအချက်​​တွေ ကပဲ KIA ကို အနာဂတ်​ ဖယ်​ဒရယ်​ ပြည်​​ထောင်​စုမြန်​မာ နိင်​ငံ ​တော်​ရဲ့ လုံခြုံ​ရေး ကို အဓိက အခန်းဏ္ဍ က​နေ ပါဝင်​သွား ​စေမယ့်​ အချက်​​တွေ ပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​ " ဟု​ပြောကြား
အထက်​ပါ ​ပြောကြားချက်​များက နိင်​ငံတကာ စစ်​​ရေး​လေ့လာသူ များ
ပြည်​တွင်းပြည်​ပ မီဒီယာ ကို ​ဖြေကြား သွားခဲ့ခြင်းများဖြစ်​ပါတယ်​။
By Myutsaw kasa